10 Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni
99% yabafuna izilwane zasendle bakhetha ukuya e-Afrika ngohambo lwe-epic safari. Nokho, sikhethe ifayela le- 10 izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni, kusuka eYurophu kuya eChina, okungahambanga kakhulu, kodwa izindawo ezikhumbuleka kakhulu nezikhethekile.
1. Jiuzhaigou EChina
Ikhaya ku 40% yezinhlobo zezilwane zasendle, nezilwane eChina, isiGodi saseJiuzhaigou 4800 ukuphakama kwamamitha. Isigodi saseJiuzhaigou ingenye 10 izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni ezine- obumangalisayo landscape kanye nemvelo ecebile.
Esigodini saseJiuzhaigou, uzoba nethuba eliyigugu lokubona iPanda Elikhulu, ipanda elibomvu, I-Sichuan takin, nenkawu ekhalelwe ngamakhala. Lezi ngezinye nje zezilwane ezimbalwa ezingavamile ezihlala esigodini saseJiuzhaigou amakhulu eminyaka. Lezi zinhlobo ezisengcupheni yokuhlala zisendaweni yezimpophoma, emachibini, izintaba ze-limestone, kanye nokwakheka kukaKris, indawo yobuhle obumangalisayo obuzokhuphula imimoya yakho kanye neholide lezilwane zasendle liye ezingeni elisha ngokuphelele.
Sikuphi Isigodi SaseJiuzhaigou EChina?
Isigodi esihle saseJiuzhaigou sisesifundazweni saseSichuan eChina futhi siyatholakala eBeijing noma eChengdu.
2. Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni: IShennongjia EChina
Ukuze ubone iMfene yeSichuan Snub-nosed awudingi ukuhamba ibanga elide ngoba le nkawu engavamile ihlala emahlathini enkabeni yeChina. kulungile, iShennongjia Isiqiwu Semvelo esifundazweni iHubei kuyikhaya lenkawu egangile, ibhere elimhlophe, liguqubele, izingwe ezivamile, nebhere elimnyama lase-Asia.
Ngaphezu kwalokho, iShennongjia Nature Reserve yinhle ngokugqamile neziqongo eziphakeme nemifula ephansi. Kusukela ebusika kuye ehlobo, imibono yemvelo yasendle iyashintsha unyaka wonke, ethembisa umuzwa ohlukile noma nini lapho unquma ukuvakashela. Nokho, isikhathi esihle sokuvakasha ngoMeyi kuya kuSepthemba, futhi kufanele uwabhukishe amathikithi akho.
Ikuphi Indawo Yokulondolozwa Kwemvelo Shennongjia EChina?
Indawo yokulondolozwa kweShennongjia iphakathi neChina, futhi kungcono ukwenza isizinda sakho sezilwane zasendle edolobheni laseMuyu.
3. Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni: INtaba iHuangshan EChina
Ukukhuthazwa kwezimbongi nababhali, akumangazi ukuthi iNtaba iHuangshan iyindawo emangalisayo yezilwane zasendle emhlabeni. IHuangshan itholakala endaweni eshisayo yesimo sezulu esifundazweni sase-Anhui. Ngakho-ke, ngaphezu kokhozi olunamabala, nekati lasendle lase-Asia, izitshalo nezimbali lapha zithandeka kakhulu futhi zikhetheke kakhulu kulo lonke elaseChina.
Izilwane zasendle ezingavamile’ Indawo yokuhlala izihlahla zikaphayini zasendulo nokwakheka kwamadwala e-granitic, lapho ubungandizela ngaphezu kwamafu. Konke okudingeka ukwenze ukukhetha okukodwa kwe- 70 iziqongo endaweni enhle kakhulu ukubukwa okuhle yesiqiwu semvelo. Ngezansi, kuningi ongakubona, kufanele ukubhuka 2-3 izinsuku ezingenakulibaleka iholide lezilwane zasendle eHuangshan.
Ikuphi iMount Huangshan Nature Reserve eChina?
INtaba iHuangshan 3 amahora ukusuka eShanghai ngo isitimela sejubane elisheshayo, esifundazweni i-Anhui.
4. Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni: ILiguria yamahlengethwa e-Italy
Liguria futhi Cinque Terre badume ngogu lwazo olunemibala egqamile namadolobha. Uma ngabe ubungazi, ILiguria futhi iyindawo enhle yokubuka imikhomo namahlengethwa. Kusukela ngoMeyi kuya kuSepthemba, ungaya kolunye lwezikebhe eziningi eLiguria ekufuneni ngemuva kokuthakazelisa impilo yasolwandle e-Italy.
Amachibi amahle namawa eCinque Terre agcwele amakhava afihliwe, nezimangaliso ngaphansi kolwandle. Ngakho, kusuka esikebheni noma ukungena ngaphakathi, futhi i-snorkeling, uzomangala ngezilwane zasendle zasolwandle eLiguria. Iholide lezilwane zasendle eLiguria ngokungangabazeki lingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuchitha ihlobo.
5. Iholide Lezilwane Zasendle EPyrenees
Izinyoni ezidla inyama njengokhozi olunguGolide lundizela ngaphezu kwekhanda lakho, kanye ne-chamois ne-ibex emizileni, iPyrenees kungenye indawo enhle yezilwane zasendle emhlabeni. Ukuphakama kwezintaba okumangazayo, amakepisi aneqhwa, nokuqhakaza kwemvelo, Ipaki laseFrance iPyrenees lingenye yezindawo ezihamba phambili zamaholidi ezilwane zasendle eYurophu.
Ngakho, ngaphezu kokuhamba ezintabeni ezinhle kakhulu zePyrenees, ungahamba ohambweni lokulandela ibhere, noma inyoni yezinyoni ezithwebula izithombe. Yize iPyrenees yaseFrance iyindawo edumile yokuvakasha eYurophu, indawo inkulu ukuthi akufanele ukhathazeke ngokuthi abanye abahambi bayayethusa izilwane zasendle nezinhle.
Yini indlela engcono kakhulu yokufika kumaPyrenees aseFrance?
Ukuthatha i-Eurostar eLondon, bese kuthi isitimela se-TGV sisuka eParis noma eLille siye eToulouse siyindlela ehamba phambili ehamba phambili eya ePyrenees.
6. Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni: ICamargue eFrance
Indawo yokulondoloza izwe laseCamargue eFrance yadalwa ngo 1972 futhi kuyinto ipaki lesizwe evikelwe. namanje, amachibi asolwandle kanye namachibi omhlaba angamazwe avikelwe kakhulu eYurophu, futhi nakhu ikhaya le 400 izinhlobo zezinyoni kanye ne-pink flamingo enkulu.
Lapha uzoba nethuba lokuhamba emfuleni omkhulu kunayo yonke eYurophu, IDelta, futhi ubheke amahhashi asendle. Ngaphezu kwalokho, sOlunye lwezinyoni ezikhethekile ongabona lapha ama-Purple Herons, Terns Encane, kanye neNkunzi enekhanda elimnyama.
Isikhathi esihle sokuhamba ngesikhathi sehlobo lapho kufika izinyoni namahhashi ampunga.
Yini indlela engcono kakhulu yokuhambela eCamargue?
Ungathatha isitimela ukusuka eParis uye eNimes, Marseille, noma i-Arles, bese kuba ibhasi.
7. UFisser Hofe E-Austria
517 amakhilomitha wezilwane zasendle, iFisser Hofe entshonalanga yeTyrol ingenye yezimfihlo ezigcinwe kahle kakhulu e-Austria. Ababaningi abazi ngale ndawo, kepha lapha uzothola izindawo ezinhle zokuthwebula izithombe zezilwane zasendle.
Ngentwasahlobo iFisser Hofe isiqhakaza ngokugcwele, futhi ungaba nenhlanhla yokuthwebula uvemvane olumnandi lwe-Apollo. mhlawumbe, uzobona ukhozi oluMnyama emkhathizwe, noma enye i-chamois yasendle, i-ibex, nezingulube zasendle. Nokho, indlela engcono kakhulu yokubona lezo zilwane ezingavamile ukunyuka intaba, ukuze 3000 amamitha, komunye wemikhondo eminingi eFisser Hofe.
Yini indlela engcono kakhulu yokufika kuFisser Hofe e-Austria?
Ungahamba ngezitimela ze-OBB usuka ku- emadolobheni amakhulu e-Austria kuya edolobheni laseFiss eTyrol. Salzburg, Vienna, noma i-Innsbruck to Fiss ngesitimela se-OBB yimigwaqo ethandwa kakhulu yokuhamba ngesitimela.
8. Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni: Izilwane Zasendle Emfuleni iDanube
Ukusuka Ihlathi Elimnyama eJalimane, inqamula iYurophu iye eRomania, uMfula iDanube ungenye yezindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni. Ngakho-ke, njengomthombo omkhulu wamanzi nokudla, akumangazi ukuthi uMfula iDanube ungenye yezindawo ezinhle kakhulu zokubona izinhlobo ezisengozini yokuqothulwa.
Ngokwesibonelo, i-kingfisher encane yaseYurophu ingenye yezinto ezinhle kakhulu 400 izinhlobo zezinyoni ezihlala eMfuleni iDanube. Ngaphezu kwalokho, in IZemplen Hills, kanye nepaki kazwelonke i-Aggtelek, ungabuka 73 izinhlobo ezincelisayo, njengempungushe ebomvu nonogwaja onsundu.
9. IMerfelder Bruch Reserve Reserve eJalimane
Ikhaya lomhlambi wokugcina wamahhashi asendle eYurophu futhi okunye kokubuka okuhle kunakho konke ukubona ukugijima kwamahhashi asendle. Ngakho-ke, IHohe Mark park iyindawo oyithandayo yokubuka izilwane zasendle.
Ngaphezu kwalokho, phakathi kwamahlathi nezindawo eziluhlaza, you might be lucky to spot the beautiful Dulmen Pony. IDulmen Pony luhlobo lwamahhashi, ngihlala eMerfelder Bruch, edolobheni lamahhashi asendle, noma iRhine-Westphalia. IMerfelder Bruch iyindawo engcwele yazo zombili izinhlobo zamahhashi ezihlala ngokukhululeka endaweni yazo yemvelo.
Yini indlela engcono kakhulu yokuhambela eMerfelder Bruch?
Ukuthatha isitimela sisuka eBrithani noma yikuphi eJalimane siye eKolon naseNyakatho Rhine-Westphalia. Ngemuva kwalokho ungajoyina ukuvakasha noma uqashe imoto eMerfelder Bruch.
10. Izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni: Izimbali ze-Wengen zaseSwitzerland Alps
Zonke izindawo ezinhle ku 10 izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni ziyikhaya lezilwane zasendle eziyivelakancane eYurophu. Nokho, I-Wengen iyikhaya lezilwane zasendle ezimangalisayo futhi izulu lezitshalo. Kutholwe eziNtabeni ZaseSwitzerland, imibono lapha iyesabeka impela, nezintaba ezineqhwa, Izigodi eziluhlaza okotshani, izimpophoma, nembali ebabazekayo.
In July the wild butterflies adorn the rare Lady Slipper Orchid, amacilongo gentians, umabhebhana, nezinye izimbali ezibabazekayo eceleni kweqhwa i-Eiger. Lezi zimbali ezinhle zikhula ezindaweni eziphakeme kakhulu zaseSwitzerland Alps, phezulu isigodi esihle saseLauterbrunnen. Ngakho, zilungiselele ukukhuphukela phezulu emafini futhi usule isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka ukuze ubone lezi zimangaliso zemvelo.
Yini Indlela Engcono Kakhulu Yokuya eWengen Bernese Oberland?
Take a train to Lauterbrunnen valley, bese kuba yisitimela esiya esigodini saseWengen.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo olungeke ulibaleke, noma yonke 10 izindawo ezihamba phambili zezilwane zasendle emhlabeni: kulo lonke elaseYurophu noma eChina ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo ezi-10 Ezihle Kakhulu Zasendle Emhlabeni” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wildlife-destinations-world%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
imvublogglobalworldwide animal Amadinga BestTravelDestinationsChina bestWildlifedestinationsinchina BestWildlifevacationsworldwide WildelifeDestinations izilwane zasendle